Sifiso, amehlo zamanzi ngesivinini samanje zokuphila akekho uyamangala ikakhulukazi. ukutubeka, ukungabi ukuphumula, nokunwetshiwe ukuqwasha - konke lokhu kungenzeka kalula impendulo yombuzo kungani amehlo abomvu futhi ucasukile. kodwa Zikhona nezinye izizathu Esimweni esinjalo. Indlela ukunquma umthombo kabi ayibulale?
Uma une ngezikhathi ukuzibuza ukuthi kungani amehlo akhe ebomvu nezesabekayo inkinga glaucoma. Lesi sifo ezihambisana nezinguquko okungazelelwe ingcindezi intraocular ukuthi kuholele ububomvu. Ngaphezu kwalokho, iso eqala ukubona hhayi njengoba ecacile njengakuqala. Isimo siba sibi ubuhlungu. Ngokushesha ngangokunokwenzeka uthintane kudokotela wezifo zamehlo, ngubani ngeke anikele ukwelashwa okufanele.
Kungani amehlo akhe ebomvu futhi wacasuka ngemva kokuzivivinya? Uma inzuzo yomsebenzi iphela ukuzikhandla ngokweqile, izizathu kungenzeka astigmatism noma eyestrain. Ukwephula impilo ngeso kunciphisa ukusebenza emzimbeni, futhi ngemva umthwalo avele ukungakhululeki, ukucasuka kanye ububomvu. Ezimweni ezinjalo, umbono ukulungiswa. Ekugcineni, impendulo yombuzo othi kungani amehlo njalo obomvu, kungaba conjunctivitis. Injalo acute abavusa nolwelwesi lwamafinyila kwamehlo, kanye yokuntuleka kwezokulapha Ungabeka isifo kwifomu ezingamahlalakhona exacerbations gqwa. Zombili lezi zimo abe imithombo unomphela ububomvu nobuhlungu.
Kungani amehlo akho ebomvu, uma azikho izifo? Kungase ukudlala indima iziphi izici zangaphandle. Ngokwesibonelo, engafanele ifaniswe noma lens eliphansi - kuqinisekiswa ukucasuka kanye nokuhlukumezeka. I mucosa Ungase futhi uthole nomzimba angaphandle, futhi uma awusheshanga ukwazi ukuwususa, ngokushesha uzovela abomvu. Kwezinye izimo, lesimbi yokucasuka kukhona air conditioning, ngezinye izikhathi inkinga eside kakhulu ehlezi phambi kwe-computer. Kuzo zonke lezi zimo emehlweni moisturized ngokwanele, kungani futhi osasitini ubuso bayo. Ungakwazi uthintane onguchwepheshe ngendaba izibuko esikhethekile emsebenzini ikhompyutha noma ogelezayo nokumanzisa amathonsi, kodwa ngokuvamile ukuqeda izimbangela ezingokwenhlalo yangaphandle ukungakhululeki ngokwanele amakhambi ekhaya.
Indlela ukususa ububomvu?
Khohlwa i-alamu mayelana nokuthi kungani amehlo abomvu futhi avuvukele, usizo vasoconstrictor lehla "izinyembezi yokufakelwa" noma polyvinyl utshwala. Le mithi ukunciphisa ukulunywa futhi baduduze ukucasuka. Uma ukungakhululeki lesiRotuma ngoba nje outlasted qapha, ungazama amakhambi abantu. Ngokwesibonelo, cindezela ku-Isivalo, abenziwe itiye izikhwama, tincetu amazambane fresh noma zihambisana cubes iduku ice. Ingabe udambise ukukhathala a decoction of chamomile noma emnyama itiye eqinile. Ukuze zokuvimbela ukuba ngezikhathi ezithile ukwenza umzimba esikhethekile amehlo, kanye ukuthatha Vitamin izakhiwo kanye askorutin.
Kungenzeka yini ukulala emini ngosuku nanye lens? ezenziwe
Asphalting imigwaqo kanye nezinye izinhlelo zokusebenza of Ukhonkolo